आजको बजार मा उत्पादनहरु चीन मा निर्मित छैन पत्ता लगाउन गाह्रो छ। लगभग सबै हामी प्रयोग, चीन मा बनाउन। यहाँ र श्रम शक्ति अन्य देशहरूमा भन्दा धेरै सस्ता छ, र मान्छे संग छ, अरू कुनै एक के गर्न सक्नुहुन्छ छैन अप आउन सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा लोकप्रिय खिलौने चिनियाँ साथ आए, नवीन घरेलू उपकरण, फेरि, चीन मा जन्म भएको थियो। छोटो मा, पनि पछिल्लो गहिरो मा, राज्य बस यसको प्राविधिक र अन्य उपलब्धिहरू लागि ज्ञात थियो। आविष्कारहरू र प्राचीन चीन को आविष्कार आधुनिक उत्पादन को आधार भयो र सबैलाई धेरै चिरपरिचित आज, कुरा को प्रोटोटाइप भयो।
बाट उत्पादन चीन अत्यन्तै संसारभरि सराहना। घर जस्तै व्यञ्जन मा छ - यो अरूलाई आफ्नो impeccable स्वाद देखाउन हो। यस्तो कुरा आफ्नो बेजोड गुणस्तर र अचम्मको सौन्दर्य लागि मूल्यांकन गरिन्छ। फारसी शब्द बाट अनुवादित "बरतन" अर्थ "राजा"। र त यो छ। चीन देखि युरोपेली बरतन मा XIII शताब्दीमा एउटा अविश्वसनीय मूल्य छ। आफ्नो treasuries सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति सुन एक फ्रेम मा फ्रेम माटोको चिनियाँ कला नमूनाहरू, भण्डारण। र इरान र भारतका बासिन्दा चीन जादुई सम्भावनाहरू संग endowed छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्: खाना विष उतर भने, यो यसको रंग परिवर्तन हुनेछ। त्यसैले, सबै भन्दा प्रसिद्ध आविष्कार, प्राचीन चीन बनेको, यो सम्भव अनुमान गर्न, चीन छ।
दोस्रो मिलेनियम ई.पू. मा। ई। (तांग अवधि) ऐतिहासिक र कलात्मक मूल्य छ जो सेरामिक्स, देखिन्छ। एक सानो पछि कुनै विशेषता सफेदी र पारदर्शिता भइरहेको protofarfor उत्पत्ति। तर चिनियाँ, यो सामान साँचो बरतन विश्वास गर्दा पश्चिमी आलोचकहरु चट्टान ठूलो यो विशेषता।
प्राचीन चीन (सबैभन्दा पुरानो राज्य को एक को आविष्कार कारण र अझै पनि चासो धेरै कारण) संसारको एक वास्तविक मैट सेतो बरतन दिनुभएको छ। VII शताब्दीको सुरुमा, चीन देखि potters कसरी kaolin, मिश्रण द्वारा बरतन ठूलो उत्पादन गर्न सिकेका स्फतीय र सिलिका। को शासनकालमा गीत राजकुल त्यहाँ चिनियाँ माटोको उत्पादन को फूल।
फलाम को उपस्थिति
चतुर्थ शताब्दीमा पहिले नै। ई.पू.। ई। चीन मा यो फलाम smelting प्रविधि ज्ञात थियो। एउटै अवधिमा, वा सायद पनि पहिले, चिनियाँ एक इन्धन रूपमा एक उच्च तापमान प्रदान जो कोइला, प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्। यो प्राचीन चीन (उपलब्धिहरू र आविष्कार हाम्रो लेखमा वर्णन गरिएको) को रूपमा, सुँगुर फलाम उत्पादन लागि निम्न विधि विकसित भएको थियो, यो अवस्थामा छ: पग्लिने पट, एक पाइप आकारको मा, स्ट्याकहरूको विकसित फलाम अयस्क। Sami क्षमता obkladyvali कोइला र यो जलाए। यो प्रविधि सल्फर को अभाव सुनिश्चित छ।
plows, अक्षहरूमा र अन्य उपकरण लागि चक्कु, chisels, plowshares उत्पादन लागि प्रयोग फलाम डाली। यो सामाग्री घृणा छैन, र खिलौने को निर्माण मा गरे। कारण यसको फलाम smelting प्रविधि गर्न, चिनियाँ डाली धूपदान र बर्तन अत्यन्तै पातलो पर्खालहरु संग।
यस्तो अवस्थामा, प्राचीन चीन जस्तै व्यापक यस दिन प्रयोग गरिन्छ जो उपलब्धिहरू र आविष्कार, गहिरो ड्रिलिंग को एक विधि आविष्कार भएको थियो। यसलाई प्रथम शताब्दीमा भयो ई.पू.। एक तरिका यो सम्भव माटो मा प्वालहरू ड्रिल गरिएका संग आएको, गहिराई जो डेढ हजार मीटर पुग्यो। आज प्रयोग rigs, ड्रिलिङ, पुरातन चिनियाँ द्वारा आविष्कार कि सिद्धान्त यस्तै काम। तर ती दिनमा साधन सुरक्षित गर्न टावर उचाइ मा 60 मीटर पुग्छ। प्वालहरू भएको स्ट्याक पत्थर को उपकरण निर्देशन आवश्यक इलाका बीचमा मजदुर। आज, यो उद्देश्य लागि पुस्तिका ट्यूब प्रयोग गरिन्छ।
त्यसपछि, सन र बांस असर संरचना बनेको एक डोरी प्रयोग गरेर मास्टर नियमित उठाउनु र ड्रिल फलाम कम। सम्म यो जो मा प्राकृतिक ग्याँस को एक पत्र निहित आवश्यक गहिराई, पुग्छ यो हालसम्म गरेको थियो। आफ्नो पछि नुन को उत्पादन मा इन्धन रूपमा प्रयोग।
उत्तरी गर्न वा पूर्व
प्राचीन चीन को आविष्कार को लामो सूची गर्न सक्छन्। कम्पास आफ्नो पाँच को पहिलो उल्लेख लायक छ। पुरातन समयका भएकोले चिनियाँ एक चुम्बक को अस्तित्व सचेत छन्। लेख III मा। ई.पू.। ई। मध्य राज्य बासिन्दाहरू, उहाँले फलाम आकर्षित गर्न सक्ने चिनिन थाले। रूपमा प्रारम्भिक र तिनीहरूले यो सामाग्री दक्षिण र उत्तर हो जो पक्ष संकेत गर्न सक्षम छ भनेर बुझे। संभाव्यतः, एकै समयमा यो आविष्कार भएको थियो र पहिलो कम्पास। तर, त्यसपछि उहाँले आफ्नो अक्ष वरिपरि revolved र उपकरण, काठ वा तामा को अडान समान को केन्द्र मा राखिएको एक चुम्बकीय चम्चा जस्तो। यस उपकरण मा एक Dividing लाइन प्रकाश छेउमा हो। चम्चा नियमित दक्षिण औंल्याउनुभयो। यस्तो यन्त्र "संसारको नियन्त्रण जो चम्चा।" भनिन्थ्यो
XI शताब्दीमा सट्टा magnetized फलाम वा इस्पात चिनियाँ चुम्बक प्रयोग गर्न थाले। यस समयमा, धेरै लोकप्रिय र पानी कम्पास थियो। पानी संग एक पोत magnetized इस्पात सुई कम थियो मा: रूपमा प्रयोग यस्तो उपकरण निम्नानुसार जहाँ एक राज्य - प्राचीन चीन, को आविष्कार साँच्चै अद्वितीय र अचम्मको छ। यो माछा को रूप मा बाहिर र लम्बाइमा छ सेन्टिमिटर पुग्यो थियो। आंकडा टाउको बस दक्षिण इशारा। समय, माछा परिमार्जनहरू पासोमा परे र एक साधारण कम्पास सुई भएको छ।
घोडा-चढेर मान्छे लामो समय पहिले संलग्न सुरु गरेका छन्। लामो समय को लागि उनि एक footrest बिना घोडा मा यात्रा। को रकाब त्यसपछि बेबिलोनीहरूले वा वा Medes, न युनानी न त अन्य पुरातन मानिसहरूका ज्ञात थिएनन्। छिटो मान्छे ड्राइभिङ गर्दा लड्नु छैन ताकि, घोडा गरेको माने अपनाउँछन् थियो। तर प्राचीन चीन को ठूलो आविष्कार साँच्चै यसको योग्य छैन भने, यस्तो प्रतिष्ठित शीर्षक लगाउने छैन। शताब्दीको III मा चिनियाँ यस्तो असुविधा बच्न आविष्कार। त्यतिबेला तिनीहरूले अविश्वसनीय प्रतिभाशाली metallurgists छलफल थिए, र एक रकाब सुरुवातको लागि त्यसैले फलाम र कांस्य प्रयोग गर्न थाले। दुर्भाग्यवश, यो कुरा आविष्कार गर्ने व्यक्ति को नाम संरक्षित। तर चीन मा धातु को रकाब कास्ट गर्न सिकेका छन्, र तिनीहरूले सही आकार भएको थियो।
कुनै कागज थियो भने
प्राचीन चीन, जो को आदर पाउनुपर्ने आविष्कार, पुस्तक को विकास मा एक नयाँ युग खुलेको छ। चिनियाँ कागज र मुद्रण आविष्कार गर्न व्यवस्थित। सबैभन्दा प्राचीन hieroglyphic पदहरू ई.पू. को प्रकृति, फिर्ता 3200 साल मिति। ई। चीन मा छ वटा राजवंशहरु को अवधिमा लिथोग्राफी खोलिएको थियो। पहिलो पाठ ढुङ्गा मा ढकढक्याउन, र त्यसपछि कागज मा छाप गरे। को आठ शताब्दी ई.पू. मा, बरु पत्थर को कागज प्रयोग गर्न थाले। त्यसैले त्यहाँ उत्कीर्णन र woodcut थियो।
पौराणिक कथा अनुसार, कागज को आविष्कारक भयो कै Lun - सम्राट्लाई रखौटी को सेवक। उहाँले पूर्वी हान राजवंश को समयमा बस्थे। ऐतिहासिक स्रोतहरू कै बनाउन कागज रूखहरू, माछा मार्ने जाल र rags को छाल प्रयोग स्थिति। यो यहाँ प्रेषकलाई सिर्जना सम्राट्लाई प्रस्तुत छ। कागज दृढ मानिसजातिको जीवन मा स्थापित छ देखि र यसको अस्तित्वको एक अपरिहार्य विशेषता बनेको छ।
धेरै शताब्दीयौंदेखि, पश्चिमी देशहरूमा मात्र रेशम निर्माता, चीन थाह थियो। एक चरम प्राचीन मा, आकाशीय साम्राज्यको बासिन्दाहरू यस सुन्दर सामाग्री बनाउने रहस्य नजिकै। Si लिन, सम्राट्लाई पत्नी भयोंग डि, सिकाउनुभयो चिनियाँ केटीहरू silkworms, रेशम प्रशोधन र प्राप्त कुरा yarns को बुनाई बढ्न।
सबै भन्दा प्रसिद्ध आविष्कार
"प्राचीन चीन बासिन्दा को आविष्कार" शीर्षक सूची gunpowder जस्तै यस्तो पदार्थ एक उल्लेख बिना अपूरो हुनेछ। पनि प्रथम शताब्दीतिर चीन देखि ई alchemists सँगै कोइला संग पाउडर को रासायनिक सूत्र लागि आधार छ सल्फर र नाइट्रेट को एक मिश्रण, प्राप्त गर्न सिके। यो खोज एक बिट व्यंग्यात्मक थियो। र सबै किनभने चिनियाँ यसलाई अमरता प्राप्त गर्न सम्भव थियो जो मार्फत पदार्थ प्राप्त गर्न प्रयास गरेका थिए। बरु, तिनीहरूले जीवन दूर लिन्छ केहि सिर्जना गर्नुभएको छ।
Gunpowder हथियार र घरेलू उद्देश्यका लागि actuate गर्न प्रयोग भएको थियो। ठीक छ, युद्ध स्पष्ट छ, तर के शान्तिपूर्ण जीवन? यस्तो खतरनाक पदार्थ को के प्रयोग गरेको छ? यो फैलन भयो वा त्यो रोग (महामारी) गर्दा gunpowder एक निस्संक्रामक को भूमिका खेलेका कि बाहिर जान्छ। पाउडर शरीरमा अल्सर र घाउ को एक किसिम उपचार। उहाँले पनि कीरा Hunted।
केही थप नवाचारै
प्राचीन चीन (आविष्कार माथि वर्णन) र अन्य थप खुलने दावा। उदाहरणका लागि, यो मध्य राज्यको बासिन्दाहरू जो बिना आज एक महान् घटना पारित गर्दैन आतिशबाजी, आविष्कार थिए छ। Seismoscope पहिलो प्राचीन चीन मा देखियो। धेरै Gourmets चिया प्रेम बढ्न र देशमा पकाउन कसरी सिके। र त्यहाँ एक क्रसबो, एक यांत्रिक घडी, घोडा दोहन, फलाम हलो र धेरै अन्य उपयोगी वस्तुहरू देखियो।
मुद्रा सुधार Kankrin
Mariya Leschinskaya - पोलिश राजकुमारी फ्रान्स को रानी भइन्
मापदण्डहरु आदर्श महिला र पुरुष तथ्याङ्कले। महिला र पुरुष को आँखा मार्फत आदर्श आंकडा। सही आंकडा कसरी हासिल गर्न
"कुलपति" मा रूपमा पैसा बनाउने? सामाजिक सञ्जाल मा वास्तविक आय
आफैलाई मदत: एक इंजेक्शन तापमान
मार्क: टिकटहरु को प्रकार, संकलन दुर्लभ उदाहरणहरू
मान्छे सकारात्मक फिलिमहरु चयन!
Dalaman हवाई अड्डा सधैं अतिथि प्राप्त गर्न तयार छ
म कसरी मोबाइल उपकरणहरूको एक किसिम Yota मा ब्यालेन्स थाह
भेनस को ठूलो के हो? भेनस को आम वातावरण
ओरेनबर्ग क्षेत्र मा माछा पकडने: माछा पकडने को स्थानहरु र समीक्षाएँ